Ukuhlonipha nokuzithoba ekuziphatheni ngokocansi - Idlalwa indima
Izikhonkwane, amahlombe, injabulo
Ngezikhathi lapho konke kuvunyelwe futhi akukho lutho olusabisayo, kungaba nzima ukuzwa nokuzwa ukucabanga. Ukuguqulwa okuqhubekayo kwenzé abantu abaningi behluleka ukucabanga nokuziphatha ngokocansi. Awukwazi ukuphefumula okwakwenqatshelwe, okuvela kulokho okuhlangenwe nakho okubuhlungu okwenzeka khona.
Uthando, ukufisa kanye nomdlalo
Kodwa umuntu ngobuhlakani bakhe ungumthombo wokuvuselela njalo nokuvuselela. Ngakho-ke uye waphumelela ukuphefumula impilo entsha ekuziphenduleleni.
Udinga ukucinga okuthize, kodwa usathola izinto ezincane kakhulu futhi ngakho-ke zizungezwe yi-aura yezinto ezingavamile nezezinqatshelwe.
Ingxenye yokuphila yobungane ithola isikhathi esifushane futhi esifushane, okungenani okungenani kungenxa ye-blunting okukhulunywa ngayo ngokobulili.
Ngakho-ke kuleso mbhangqwana hhayi nje ukuthola ukuvumelanisa emibhalweni yansuku zonke, lapho wonke umuntu angaphila kahle, kodwa futhi ukuba avuselele njalo futhi azichaze ngendlela yesondo.
Ngokuvamile into entsha, okushoyo.
Wonke umuntu unengqondo, kodwa hhayi kuphela ukucabangela, kodwa futhi amafantasy, imizwa yokuzikhukhumeza ukuba ibe ecacile. Okungabonakali noma ukukhonta okuletha umuntu kakade ukuthi uyathokozisa, uma ucabanga nje ngakho. Ngokuvamile, lezi zifiso ezinengqondo azihlali zingagcwaliseki ngoba azikhulumi ngokucacile futhi ziqondakala nomlingani. Kodwa lokho akumelwe kube, ngoba ngisho nomlingani unesifiso socansi esiyimfihlo, angathanda ukuhlala ngaso.
Kuyithuba lamabhangqwana lapha ukuze basize omunye nomunye umlingisi wekhwalathi ngokwabo ezingeni elilandelayo lokuziphendulela - futhi alithathi okuningi kunokuxoxa kancane.
Ngokuvamile, izifiso eziningi eziyimfihlakalo azivamile ... kodwa ngubani ofuna ukuba ovamile? Akekho! Ngokuqinisekile, ezinye izinkolelo zivame kakhulu kunabanye, kodwa zonke zenani elilinganayo futhi lilingana ngokulinganayo.
Isibindi salo musha lapha yigama elingukhiye
Imibhangqwana eminingi ivame ukumangala ukuthi bayangithokozisa kangakanani emikhankasweni entsha yocansi kanye nemiphumela emihle kakhulu yokuphila kobulili okwanelisayo okungaba nayo ekuphileni kwansuku zonke.
Inkolelo evamile yobulili yabantu abaningi ihilela ukugqilazwa kwazo zonke izinhlobo. Futhi lokho akuyona intuthuko entsha. Kuye kwafakazelwa ukuthi ubugqila kanye nokunye okunjalo kuwo wonke umlando wembonakaliso wesintu kwakuyinkinga yezocansi.
Ukubusa ngokuzibandakanya kwezocansi
Esikhathini Esidabukisayo seMinyaka Ephakathi kanye naseRoma elidabukisayo lasendulo noma emiphakathini yaseMesopotamiya yangaphambili, kwakungeyona into emangalisa ukuthola ukukhishwa okukhethekile ngokugqilaza komlingani noma ukuboshwa nguye.
Izindlela zokubopha othile ziningi kakhulu futhi futhi zingabangela injabulo enkulu.
Njengomuntu omusha ezweni lemidlalo yobugqila obucabangelayo, cishe kufanele uthathe kalula ekuqaleni. Lokho akusho ukuthi ngeke kube yindle! Kuphela okumelwe ukuthi mhlawumbe kungekudala ngokushesha nge-steam egcwele ngaphambi kokuzama ukufaka lolu daba, kodwa ngokuya kancane. Ngoba ngezinye izikhathi intshiseko enkulu ingakwazi ukuqeda ukuhlolwa ekuqaleni - futhi akufanele uvumele into enhle kakhulu enhle kakhulu ukuba ihlukunyezwe ngokuba yingozi kakhulu. Ekuthuleni kukhona amandla.
Indlela engcono kakhulu yokuqala ekhaya futhi kukhona okungcono kunabo bonke embhedeni. Ngoba umbhede wasekhaya uvame ukunikeza izinketho ezinhle kakhulu zokugqilaza. Ukulala okuthunyelwe, ikhanda nezinyawo kuyasiza kakhulu njengemilenze yombhede noma ifreyimu.
Futhi, ukukhetha okuphakathi, okuyinto okuhlose ukubopha umphikisi wakhe kufanele kuhlelwe kahle. Kungcono ukukhuphuka ngezinto ezincane. Isikhwama esihle mhlawumbe noma intambo esithambile - isikhumba ne-flax kuzobe sekukhona isikhathi kamuva (futhi sidinga kancane ukwenza okunye).
Azikho amafindo anamanzi ekuqaleni. Ngisho noma umlingani kufanele acele. Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi ama-newbies angawatholi amafindo evulekile ... uma asetshenziswa ngendlela efanele, angadonsa amafindo eyedwa ngesikhathi senzo. Yingakho kungekho lutho olungalungile ngakho.
Yingakho kulungile ekuqaleni: Konke kuvunyelwe, kodwa ungasheshi lutho!
Abanye abantu bathanda umqondo wokusebenzisa amandla phezu kwabanye, kungaba ngokomzimba noma ngokwengqondo. Abanye abantu, ngakolunye uhlangothi, bakhetha umqondo wokubuswa omunye umuntu - futhi ngokomzimba kanye nangokwengqondo.
Kukhona izizathu eziningi zalokhu. Ngokuvamile abantu abazithoba ngokobulili empilweni yansuku zonke bayizikhulu kakhulu abantu, banesimo esiphezulu enkampanini yabo noma okunye ukuma okuqinile. Kubuye kube ngabantu abanamandla abangase babe namahloni ngempela ngaphandle kwekamelo lokulala. Uhlale ubheka lokho ongenawo - futhi nasensimini yezocansi.
Ukudlala indima nokubusa
"Amasimu omsebenzi" wezinhloko kanye nabazinikeleyo cishe angenamkhawulo. Ngokuvamile imidlalo ekhonjiwe kakade isetshenziselwa ukuveza indima yomlingani ngamunye. Kodwa nakanjani kungenza okungaphezu kwalokho "imidlalo" yobugqila.
Abanye abazinikeleyo bazizwa benesidingo esikhethekile ekuhluphekeni ngokomzimba. Ukuze udale lobu buhlungu, ungasebenzisa amathuluzi ahlukahlukene - yiba yizibetho, ama-whips noma ngisho namaqembu noma ama-batons. Abanye bathanda kakhulu kunabanye.
Kodwa ubuhlungu obungokwengqondo akuvamile emakamelweni okulala emibhangqwana enomkhuba wokudlala imidlalo. Ngamazwi noma izinhlobo ezithintekayo zezindlela zokuhlukunyezwa kwengqondo ezikhona zingabangela amanxeba angqondo engqondo ... Yiqiniso, azizona unomphela futhi ngenhloso yokwandisa injabulo ngesikhathi sokusebenza.
Kufanele uqaphele ukuthi ungadluli. Ngaphambi kwesenzo ngasinye kufanele wenze nomngane wakho okuthiwa "igama eliphephile". Uma leli gama eliphephile libizwa, zonke izenzo kumele zimiswe ngokushesha futhi ngaphandle kokuphikisa. Ngenxa yalokho, njengengxenye ethobela, unesiqiniseko sokuthi ngeke ugobe kakhulu.
Abanye bezilwane zesigcawu bathi omunye kufanele "ayeke lapho egazini", nabanye, bese kuthokozisa kuphela ukujabulisa okuphelele. Yisihloko ngasinye lapho wonke umuntu kufanele ahlole imingcele yakhe. Ayikho imithi ejwayelekile yokuthola ubuhlungu obukhulu noma ukusetshenziselwa ukusetshenziswa kobulili okuphezulu. Kodwa isalokhu: Konke ukulinganisela.